Sida loo sameeyo Friends In la qariibsado New qaybaha caalamka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sida loo sameeyo Friends In la qariibsado New qaybaha caalamka
U safraan qaybaha kala duwan ee dunida oo keliya noqon kartaa waayo-aragnimo wax Nuurin oo xiiso leh. Haddii ay tahay wax aad waqtiga oo dhan sameeyo, ama hal mar ah in safarka uu nool yahay si loo ballaariyo jahooyinka aad, safarka beddeli kartaa nolosha.
Dad badan oo maalmahan ay doortaan in ay keligaa u safarto, itihad by xoriyadda noocaas ah waayo-aragnimo dalabyo. LifeHack sharaxayaa sababta uu noqday sida hab caan ah by kuwaas oo si aad u aragto dunida sannadihii la soo dhaafay.
Haddii aad keligaa sameyn safarka, qayb ka mid ah u quudhin la kulanka dad cusub, inta badan kuwa aad u kala duwan naftaada, laakiin dhammaan kii rajeynayaa taajir ka dhigi doono quudhin guud ee safarka.
Sidaas, aynu eegno dhow at qaar ka mid ah siyaabaha kala duwan ee aad la kulmi karto dadka qaybo cusub dunida.
Inkastoo kooxaha waa doorasho cad, The Guardian-ka soo jeedisay inay boos ka waayay la millennials. music Live ayaa noqonaya mid aad uga caan ah, waqti ee u dhexeeya nooc inay maqlaan naftaada qabaa oo waxaad ka samaysaa isbarteen cusub.
Waxaa jira dad badan oo baararka hip weyn badan oo Yurub ah, kuwa raadinaya in ay safarka ku wareegsan kooxaha Paris, Luxembourg, iyo London, kaamil ah oo dhan, waayo, kulan qofka xiga cusub ee aad u quudhin.
Playing Turubku waa a Jidka weyn in uu la kulmo dad cusub, sida aad ku wareegsan tahay miis raadinaya si ay u fahmaan qofka kaa soo horjeeda. Waxaad iyaga ku baran, kaftan iyaga oo dhaaraheedii ay dhistaan ​​oo aad qaadi karto iska galay aad safaradiisa.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ka ciyaaro Turubku waa in ay fududahay in ay bartaan, taasoo la micno ah xitaa laylis ah u qaadan kartaa si deg deg ah in la isticmaalo si ay shirka dadka cusub. Dugsiyada card on Partypoker bixiyaan casharo ku saabsan Texas Holdem kuwa yar inay waayo-aragnimo lahayn ee ciyaarta.
All aad hadda u baahan tahay in la helo goob khamaarka, kuwaas oo ay jiraan badan oo adduunka oo dhan la siinayaa fursad si ay ula falgalaan shisheeyayaal, ma ahan oo keliya dadka safarka ah, laakiin dadka deegaanka iyo sidoo kale.
"Qayb ka mid ah xiiso leh waxaa halkaas helitaanka '; Imisa jeer ayaad maqashay in safar dheer? Iyadoo keli u safraya, waxaa laga yaabaa saxda ah.
Waxaa jira qaar ka mid ah sodcaalladoodii oo cajiib ah tareenka in la qaadi karo ee guud ahaan Yurub, marayay qaar ka mid ah goobaha ugu quruxda badan qaarada in uu dalab. Inkastoo aad tahay on tareen, dadka kale sida maskax badan tahay in ay jiri aad.
Waa hab fiican si ay ula kulmaan dadka ka soo dhammaan qaybaha nolosha, dadka deegaanka u safraya iyo shaqada, safra kale ay u quudhin iyo malaha xataa qof aad aakhirka qaar ka mid ah waayo-aragnimada la wadaago.
Sport waa sida badan soo jiidashada dalxiiska maalmahan sida ay tahay wax dadka deegaanka si ay ugu raaxaystaan. Haddii ay tahay safar garoonka ama fursad ay ku qaataan dhacdo live, waa hab fiican ee naftaada imbuing ee dhaqanka ee meel.
Waxaa laga yaabaa in ay qaataan in ciyaarta cricket ee Asia a, ama u muuqata inay raacaan dalka ku wareegsan Euro 2020 taasoo Sky Sports sharxayaa waxa u sabab ah inuu ka dhaco magaalooyinka kala duwan ee Yurub. Waxaa jira kumanaan ka mid ah dhacdooyinka dhamaan aduunka oo dhan maalin kasta in aad bixiyaan fursad ay ku kulmaan qaar ka mid ah dadka cusub oo ku saabsan safarka aad.
Ma waxaad diyaar u tahay in safarka iyo Samee asxaabtooda ku sugan qaybo ka mid qalaad cusub dunida? Save A tareenka kaa caawin Book A tareenka fudud oo jaban.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Inta badan Magaalooyinka Qarniyadii Beautiful In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-make-friends-in-strange-new-parts-of-the-world/ – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa luqadaha / NL in ay / fr ama / de iyo in ka badan.
#saaxiibo #safarka dunida strangeplaces traveltips
Liam Cartwright waa qoraa madaxbanaan iyo globetrotter oo uu nolosha ka go'an in ay booqashada meelo cusub iyo dad cusub. Sida uu leeyahay (inta badan) Solo socotada uu fahmaa dhibaatooyinka ah in uu dalka ku cusub iyo qof kasta oo aan garanaynin. Waxa uu rajeynayo in articles uu ku siin doonaa talooyin fiican oo ku saabsan sida si ay u noolaadaan sida sahamisa Solo iyo Socdaalba la shaqayn jiray kulmaya. Marka uusan sahaminta dalalka cusub ee isaga la heli karaa guriga la fikirka buugga safarka ku saabsan safarka soo socda. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir